ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အရက်သောက်ရင်… -
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အရက်သောက်ရင် ကလေးအပေါ်ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲ ?
ဒီခေတ်မှာ အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ ဘာမှထူးဆန်းတဲ့ အရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော Alocohol ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးစွဲကြပါတယ်။ ပုံမှန်လူတွေအတွက် စကားပြောကောင်းရုံ၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေသောက်ကြတာဟာ ကြီးကြီးမားမား ဆိုးကျိုးမခံစားကြရပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်‌‌တွေမှာဆို မိခင်ရော ကလေးမှာပါ မလိုလားအပ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်လူတစ်ယောက်အတွက် Safe ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Alcohol Limit ရှိပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်တစ်‌ယောက်အတွက် Safe ဖြစ်တဲ့ Limit ဆိုတာ ရှိကို မရှိတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံပဲ ချို့တဲ့ပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့အဓိက တရားခံဟာ အမေက ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း အရက်သောက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်‌ဆောင်သူဟာ အရက်ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်‌ တစ်ခွက်လောက်သောက်နေရင်တောင် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်တဲ့အခါ မိခင်ရဲ့သွေးမှ ကလေးရဲ့ ချက်ကြိုးကိုဖြတ်ပြီး ကလေးကပါ အရက်သောက်နေသလိုဖြစ်နေမှာပါ။ Binge drinking လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ခါတည်း 5ခွက် လောက်သောက်လိုက်ရင်တော့ ဝမ်းတွင်းမှာပဲ ကလေးအသေမွေးဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအလွန်များသွားပါပြီ။
အရက်ကြောင့် မိခင်နဲ့ ရင်သွေးဟာ ဘယ်လိုဝေဒနာတွေခံစားရနိုင်လဲ ?
3) ကလေးလမစေ့ ပေါင်မပြည့်မွေးလာခြင်း။
4) မွေးရာပါရောဂါပါလာခြင်း (နှလုံးနှင့်ကျောက် ကပ်ရောဂါများပါလာခြင်း)၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ အာခေါင်ကွဲ၊ လျှာကွဲများဖြစ်နေခြင်း။
5) Fetal alcohol spectrum disorders (FASDs) လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ကလေးရဲ့ တွေးတောစဉ်းစားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းကို မပြုလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
6) ကလေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကောင်း မဖွံ့ဖြိုးတော့ပဲ ညက်နေတယ်။
Fetal Alcohol Syndrome ဟာ ကုသလို့ပျောက်နိုင်လား ?
မပျောက်နိုင်ပါဘူး။ Behavioursတွေကလဲ အသက်အရွယ်လိုက်ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ လေးဖက်ထောက်အရွယ်မှာဆို ဂနာမငြိမ်ပဲ ထိန်းရခက်တယ်၊ တခြားကလေးတွေလို စကားလုံးအလွယ်လေးတွေကို နားမလည်ဘူး၊ တစိမ်းတွေကိုလဲ မကြောက်တတ်ဘူး၊ ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်လိုက် ဖွံ့ဖြိုးလာတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ကျောင်းနေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ စာကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်ဘူး၊ စာဖတ်ရခက်တတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။
နို့တိုက်နေတဲ့ကာလမှာရောက်သောက်လို့ရ လား ?
မရပါဘူး။ အမေစားသမျှအာဟာရက ကလေးဆီရောက်နေမှာပါ။ အရက်သောက်ရင် နို့ထွက်တာလဲ နည်းစေတယ်။ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်လဲ ထိခိုက်မှာပါပဲ။
အဲ့တာကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကိုယ်ဟာ အရက်သောက်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်မယူခင် အရက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးမှ အရက်သောက်မိနေရင် ကိုယ့်ရင်သွေးမှာဖြစ်လာတဲ့ Fetal Alcohol Syndrome တွေကို ကလေးက တစ်သက်လုံးခံစားရမှာပါ။ဒီအချက်တွေ သိနေဖို့ အလွန်အ‌ ရေးကြီးပါတယ်နော်။
Nov 22, 2021 Health Tips, Pregnancy and Women Health